चरिकोट अस्पतालले किन गर्यो शिशुको चिरफार ? के छ भित्री रहस्य ?? - Edolakha
चरिकोट अस्पतालले किन गर्यो शिशुको चिरफार ? के छ भित्री रहस्य ??
1 year ago/Tuesday, January 22nd, 2019
दोलखा, ८ माघ ।
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा भीरबाट लडेर मृत्यु भएका एक पुरुषको शव पोष्टमार्टमपछि आर्यघाट पु¥याउँदा एउटै पोकामा नवजात शिशुको पनि शव फेला परेपछि विभिन्न आशंका उव्जिएको छ । चिरफार समेत गरिएको अवस्थामा रहेको नवजात शिशुको शवलाई लिएर थप शंका/उपशंका उव्जिएको हो ।
भिरबाट लडेर मृत्यु भएका दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्वर १ फासेलुङका ४४ वर्षीय कालुमान थामीको शव पोष्टमार्टमपछि अन्तिम संस्कारका लागि सनिवार घाटमा पु¥याउँदा सँगै अर्काे नवजात शिशुको शव फेला प¥यो । सो घटनाले मलामीसहित सबैलाई अचम्मित पा¥यो । कसरी भयो त, यस्तो गम्भिर त्रुटी भन्ने विषयमा अस्पतालप्रति प्रश्न उठेको छ । एक पुरुषको शवसँगै नवजात शिशुको समेत चिरफार गरिएको शव राखिनुले बच्चाको मृत्यु र शव चिरफारको घटना शंकास्पद देखिएको हो ।
यो घटनामा अस्पतालको ठूलो लापरवाही भएको स्थानीयको आरोप छ । तर, अस्पतालले भने आँफुहरुको लापरवाही नभएको दावि गरेको छ । त्यसो भए एक नवजात शिशुको शव कसरी अर्काे पुरुषको शवसँग एउटै पोकामा प¥यो त ? भन्ने प्रश्नमा प्रस्तावित चरिकोट अस्पतालका मेडिकल डाईरेक्टर डा. विनोद दंगाल पोष्टमार्टम गर्ने ठाउँ एउटा मात्रै भएको र बच्चाको शव सानो हुने भएकाले सोही मानिसको लुगा ठानेर एकै ठाउँमा परेको हुनसक्ने बताउनुहुन्छ ।
आमाको पेटभित्रै मृत्यु, तर नर्मल डेलिभरी !
शिशुको आमाको पेट भित्रै मृत्यु भएको र नर्मल डेलिभरी भएको अस्पतालले जनाएको छ । शिशुको मृत्युलाई स्वभाविक मानिए पनि मृत्यु भएको शिशुको शव चिरफार गरेर अर्काे शवसँगै पठाउनु शंकास्पद छ । र, त्यो नवजात शिशुको अभिभावकबारे नखुलाउनु अर्काे शंकाको विषय बनेको छ । यद्धपी डा. दंगालले भने विरामीको गोपनियताको कुरा भएकाले परिचय खुलाउन नमिल्ने दावी गर्नुभयो । दोलखा जिल्लामै घर भएकी २० देखि ३० वर्ष उमेर समुहकी एक युवतीको पहिलो बच्चा भएको र लैगिक हिसावले छोरा रहेको सो बच्चाको आमाको पेटमै मृत्यु भएपछि मृत्युको कारण बुझ्नका लागि शिशुको चिरफार गरिएको डा. दंगाल बताउनुहुन्छ ।
शिशुको शवलाई परिवारले किन लगेन ?
शिशुको मृत्यु त भयो, तर मृतक शिशुको शवलाई किन परिवारको जिम्मा लगाईएन ? अस्पतालकै भनाईलाई आधार मान्दा नर्मल डेलिभरी भएको र आमा समेत नर्मल अवस्थामा रहेको अवस्थामा मृतक शिशु चाहीँ किन अस्पतालमै छाडियो त ? मृतक शिशुका आमाबुबा यो बिषयमा किन अहिलेसम्म बोलेका छैनन् ? झनै शँका छ । डा. दंगाल मृत शिशु परिवाजनले लैजान नचाहेपछि परिवारकै आग्रहमा डिस्पोजका लागि अस्पतालमै राखिएको दावी गर्नुहुन्छ ।
अस्पतालको लापरवाही भएको स्थानीयको आरोप
यसअघि अस्पतालले मृतक थामीको आफन्तले नै शव पोष्टमार्टमपछि लिएर जाँदा आफ्नो सामान ठानेर बच्चाको शव पनि लगेको बताए पनि स्थानीयले भने शव प्याकिङका बेला कसैलाई पनि भित्र जान नदिएको बताएका छन् । जानीजानी अर्काको शव लैजान आवश्यक नभएको र अस्पतालकै लापरवाहीका कारण घटना भएको भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्वर १ का वडाअध्यक्ष बिरवहादुर थामी बताउनुहुन्छ । मृतक थामीको शव अन्तिम संस्कारका लागि घाटमा पु¥याएर जलाउनका लागि कपडा र प्लास्टिकले बेरेको प्याकिङ खोल्न खोज्दा चिरफार गरिएको अर्काे बच्चाको शव समेत सोही पोकामा भेटिएपछि तनाव भएको उहाँको भनाई छ ।
हेर्दा सामान्य, तर शंकै शंका !
यो घटनाले कतै चरिकोट अस्पतालले मोटो रकम लिएर अवैध गर्भपतन गराएको त होईन ? भन्ने शंका पनि उव्जिएको छ । घटना शंकास्पद बनेपछि दोलखा प्रहरीले पनि विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुहुन्छ दोलखाका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायव उपरिक्षक डिएसपी वासुदेव पाठक । घटनामा गम्भिर मानवीय त्रुटी भएको भन्दै डिएसपी पाठकले अपराधिक नियमतले हो वा होईन भन्ने विषयमा भने पुष्टी भईनसकेको र थप अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
हेर्दा सामान्य लाग्ने यो घटनाले न्यायहेल्थको सहयोगमा प्रस्तावित चरिकोट अस्पतालका बारेमा एकैसाथ धेरै प्रश्नहरु उव्जाई दिएको छ । के यो अस्पतालमा अवैध रुपमा गर्भपतन गरिन्छ ? मृतक शिशुको शवलाई नाभिदेखि टाउकोसम्म किन चिरिन्छ ? कतै, चरिकोट अस्पतालमा आउने चिकित्सकहरु स्वयँ प्रयोगात्मक अभ्यास त गरिरहेका छैनन् ? यी सवै प्रश्नहरु अझै अनुत्तरित छन् ।
८ माघ, २०७५ । ३ः ३० बजे प्रकाशित ।
VIEWS: 17480 पटक हेरीएको